Asturnaanta - PetrPikora.com
Shirkadda PetrPikora.com ayaa u adeegsaneysa khibradda ganacsiga HSTS (HTTP Nabadgelyada Gaadiidka Hubinta Khatarta ah). HTTP Ammaanka Gaadiidka Khatarta ah (HSTS) Wixii macluumaad ah oo ku saabsan farsamoyaqaanku, si aad uhadal ah si aad uhogasho ah websaydhka ah websaydhku wuxuu hoos u dhigi doonaa hoos u dhigis ah a Zjednodušuje ochranu proti únosu spojení (tzv. afduubka cookie). Mechanismus umožňuje, macmiilka aby webwiki ayaa la siiyaa si aad u hesho si aad u aragto isugeyn ah HTTPS připojení a vyloučil tím přenos dat nezabezpečeným HTTP protocol. HSTS qeexan RFC 6797. Halkaan waxaad ka heleysaa boggaga HTTP Xakamaynta-Gaadiidka-Badbaadada, oo wuxuu yidhi, Qaynuunnadayda waxaan gelin doonaa maankiisa, oo madaxadaygguna wuu gooyaa. HSTS ayaa lagu soo bandhigay warqad ku saabsan macaamiishu ku shaqeyneyso (odposlechy) oo ku saabsan hawlaha firfircoonida. Díky HSTS habdhaqameedka, ka mid ah-in-the-dhexe-dhexe, velmi sníženou šanci, že odchytí něcaké žádosti či požadavky odeslané más vištám a máljárás. Soo dhawow!
Our website ururin macluumaadka soo socda ee ku saabsan booqashada:
Warbixin, Kateré jsou nepovinné a jenž uživatelé poskytují dobrovolně. Jedná se o jméno, případně přezdívku, e-mailka adoo soo dira, adigoo isticmaalaya bogga internetka. Toto jsou dobrovolně poskytnuté informace pro pro účast v komentářích ke článku, popřípadě pro odběr odpovědí k těmto komentářům av návštěvní knize.
Lahaayeen ururiyey macluumaad (ie. Helay aan aad si firfircoon oo bixiya macluumaad ah) iyadoo la isticmaalayo teknoolajiyada kala duwan iyo hab, sida cinwaanada Protocol Internet, cookies, kuwa kale Internet Tags. Macluumaad Tani waxay u ogolaaneysaa content dawaarle fiican in dadka isticmaala iyo caawin doonaa xayeysiiya iyo maal-fiican u fahmo visitors our .
Na těchto webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Kusoo dhawoow mohououmu rikulus (nikoli však jméno, cinwaanka e-mailka ah ee telefoonka ah) waxaad ku qori kartaa bogga internetka si aad u aragto sawiradaada, wargeysyada.
Google, sida xisbiga iibiya saddexaad, wuxuu isticmaalaa in ay u adeegaan xayeysiis on cookies site this. Gamuun cookie awood Google adeegaan xayeysiis in dadka isticmaala oo ku salaysan booqashada ay ku this site iyo goobaha kale ee internetka.
Uživatelé se mohou po přečtení Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah advertising iyo Google Network Content z používání souborů cookie DART Unsubscribe.
daalacashada Inta badan waxaa si toos ah qarka u saaran inuu aqbalo files cookie, laakiin aad browser lagu hagaajin karo in ay diidaan oo dhan cookies ama si ay u muujiyaan in cookie ah loo soo diray. Tilmaamo iyo adeegyada qaarkood Google laga yaabaa in aan sii fiican u shaqeyo, haddii cookies aad naafo tahay.
Haddii aad rabto, waad wici kartaa wakhti kasta diido files cookie ka Google Inc Wixii faahfaahin ah ee ku saabsan Google Diididda cookies DoubleClick.
Cookie Advertising Opt-baxay plugin permanentně zakáže v internetových prohlížečích Firefox Internet Explorer a záznam "cookie DoubleClick", který je využíván Googlem pro vyhodnocení návštěvnosti odkazů a následně pak pro reklamní účely.
Qaybtan, waa inaad sheegtaa URL of your site, iyo sidoo kale magaca shirkadda, urur ama shakhsi ka shaqeeya this site iyo macluumaadka saxda saxda ah.
Xaddiga macluumaadka aad u baahan tahay inaad sameysid way kala duwanaan doontaa iyadoo ku xiran xeerarka Yurub ama gobolka iyo sharciyada. Tusaale ahaan, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso cinwaanka jirka, lambarka aqoonsiga shirkadda.
Doporučený text: Cinwaankayagu waa: https://petrpikora.com.
Waxa aan soo uruurineyno iyo sababta aan u soo aruurinno
V této sekci by juni uvést, jake osobní údaje shromažďujete od aživatelů a návštěvníků stránek. Mohou si aad u ogaatid například data transakcí - xogahay o nákupu; Techniké údaje - wareysi o cookies; a osobní údaje - Wixi warar ah oo ku saabsan email.
Waa inaad sidoo kale bixisaa macluumaad ku saabsan ururinta iyo keydinta xogta shakhsi ahaaneed ee xasaasiga ah, sida xogta caafimaadka.
Marka lagu daro caymiska macluumaadka shakhsiga ah ee aad soo uruuriso, waxaad u baahan tahay inaad sheegto sababta aad u ururinayso. Sharaxaadahani waa inay tixgeliyaan saldhigga sharciga ah ee ururinta iyo kaydinta macluumaadka shakhsiga ama ogolaanshaha firfircoon ee isticmaalaha.
Macluumaadka shakhsiyeed looma abuurin oo kaliya adoo la falgalaya goobtaada. Macluumaadka shakhsiyeed waxaa kale oo lagu soo saaraa habab farsamo sida foomamka xiriirka, faallooyinka, cookies, falanqaynta, iyo macluumaadka sadexaad ee xisaabta.
By default, WordPress ma ururiyaan macluumaad shakhsi ahaan loo aqoonsan karo oo ku saabsan booqdayaasha oo kaliya ururiya macluumaadka ku qoran bogga maamulka "Profile" ee isticmaalayaasha diiwaangashan. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah fiilooyinkaaga waxay kaashan karaan macluumaadka shakhsiyeed. Halkan hoose waa inaad ku darto macluumaadka ku habboon ee hoos ku xusan.
Qeybtan hoos ku xusan, waa inaad sheegtaa macluumaadka macluumaadka lagu diiwaangelinayo faallooyinka. Hoos waxaa ku qoran macluumaadka aasaasiga ah ee WordPress ururiya.
Doporučený text: Marka visitors dar comments in website this, xogta la ururiyey ee foomka muujiyay inuu ka hadlo browser IP address iyo wakiilka user string qeexaya booqdaha dheeraad ah ee, taas oo ka caawisaa in la ogaado spam.
Gravatar waxaa la siin karaa xaraf aan qarsoodi ah oo laga sameeyay cinwaanka emailkaaga (sidoo kale loo yaqaan 'hash ") si loo ogaado haddii aad adeegsanayso adeeggan. Xeerka Qarsoon ee Gravatar waxaa laga heli karaa halkan: https://automattic.com/privacy/. Marka faalladaada la ansixiyo, sawirkaaga muuqaalkuna wuxuu u muuqanayaa dadweynaha marka la eego aragtidaada.
Qeybtan hoos ku qoran, waa inaad sheegtaa xogta laga yaabo in la daabaco dadka isticmaala faylasha faylasha. Dhammaan faylasha la soo rogay ayaa badanaa la helaa.
Doporučený text: Haddii aad sawirrada ku dhejineyso boggan, waa inaad ka fogaataa inaad soo dhejiso sawirrada xogta meesha ku jirta (GPS). Booqdeyaasha goobta waxay soo dejin karaan oo arki karaan xogta goobaha laga soo galo sawirada webka.
WordPress kuma jiro foomamka xiriirka adigu. Haddii aad isticmaasho plugin inaad la xiriirto, isticmaali hoosaadka this in la qeexo waxa xogta shakhsiga ah waxaa lagu duubay marka qof uu gudbiyo foomka xiriir ah, iyo inta macluumaadkan waxaa la hadhay. Tusaale ahaan, waxaad cayimi kartaa in aad macluumaadka xiriirka foomka heshay markii qaar ka mid ah, ujeeddo ah adeegga macaamiisha, laakiin aan aad u isticmaali macluumaadkan ujeedooyin marketing aadan.
Qeybtan hoos ku xusan, waa inaad ku tilmaan cookie-yadaada goobta aad isticmaashid, oo ay ku jiraan kuwa abuura khidadahaaga, warbaahinta bulshada, iyo falanqaynta. Hoos waxaa ku jira cookies-ka lagu rakibo WordPress by default.
Doporučený text: Haddii aad ku darto faallo ku saabsan boggayaga, waxaad noo oggolaan kartaa inaan ku keydino magacaaga, cinwaanka emailkaaga, iyo bogga internetka si loo kariyo. Sidan oo kale, waxaan isku dayeynaa inaan kordhino raaxadaada markaad qorto faallo cusub, sidaas darteed maahan inaad mar kale buuxisid. Kukiyadaasi waxay socon doontaa hal sano.
Haddii aad leedahay xisaab oo aad saxeexdo boggan, waxaad sameysataa qadar ku meel gaar ah si aad u xaqiijiso in galkaagu uu qaadanayo cookies. Cookie-yadu kama mid aha macluumaad shakhsiyeed waana la joojin doonaa marka browserka la xidho.
Markaad gasho, waxaan sidoo kale samaynay dhowr cookies si aad u keydiso macluumaadkaaga kugubka iyo si aad u dhigto bandhigga shaashadda. Kukiyada la gashado waxay haystaan ​​nolol laba maalmood ah, oo muujinaya kariimka cuntada ee sannadkii hore. Haddii aad xaqiijisid "Xasuuso" dooro, login ayaa qaadan doona laba toddobaad. Haddii aad saxiixdo koontadaada, koontooyinka ku soo gala ayaa laga saari doonaa.
Haddii aad daabacdo ama aad daabacdo maqaal, cookie kale ayaa lagu keydinayaa shabakadaada. Cookie-kaasi kuma jiraan xogta shakhsiyeed oo si fudud u muujinaysa aqoonsiga boostada ee aad adigu sameysay. Hawlgalkeedu wuxuu dhacayaa ka dib maalmaha 1.
Meelaha laga soo galo meelaha kale
Doporučený text: Posts on this site ayaa laga yaabaa in ay ku jiraan content xiran (tusaale ahaan, video, sawiro, maqaalo, iwm.). Mawduucyada ku jira mareegaha kale waxay u dhaqmaan si la mid ah sida haddii booqde booqdo goob kale.
websites Kuwani ururiyaan laga yaabaa in macluumaadka kugu saabsan adiga oo isticmaalaya cookies, gelinaya statistics cid saddexaad oo dheeraad ah oo ay ula socdaan aad is dhexgalka content this gundhig, oo ay ku jiraan raadraaca wajahda content gundhig, haddii aad ku leedahay xisaabta iyo qortey in website-ka.
In hoosaadka this, waa in aad tilmaamaan gorfaynta qalab aad u isticmaali, sida dadka isticmaala dooran kartaa ka mid ah statistics, iyo sidoo kale waa inay bixiyaan link a si Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah la siiyo by bixiyaha adeegyada gorfaynta.
By default, WordPress ma ururiyo xog kasta oo shaandheyn ah. Si kastaba ha ahaatee, xisaabaadka marti gelinta badan ayaa ururiya xogta qarsoodiga ah. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa plugin WordPress oo bixisa adeegyo falanqeyn. Xaaladdan, waxaad ku dartaa macluumaadka halkani halkan.
Kuma wadaagno macluumaadkaaga
In qaybtan waa in aad bixiyaan magaca iyo liiska dhammaan bixiyayaasha dhinac saddexaad oo leh kan aad wadaagto xogta Web ah, oo ay ku jiraan wada-hawlgalayaasha, adeegyada daruur, Albaabo bixinta iyo bixiyeyaasha adeegga-saddexaad, mar sheeg macluumaadka aad iyaga iyo sababta ay wadaagaan. Haddii ay suurtogal tahay, fadlan ku soo wareeji siyaasad gaar ah.
By default, WordPress ma siin macluumaad kasta shakhsi qof.
Muddo intee le'eg ayaan ku haynaa xogtaada?
Qaybtan, waa inaad sharaxdaa muddada aad kaydiso xogta shakhsi ahaaneed ee la ururiyey ama laga shaqeeyay boggan. Inkastoo lagaaga baahan yahay inaad jadwal haysato, macluumaadka ku saabsan intaad ku kaydinayso xog-ururin kasta iyo sababta aad u haysatid, macluumaadkaan laguma qori karo halkan. Tusaale ahaan, laga yaabaa in aad rabto in aad si ay u muujiyaan in aad diiwaan foomamka xiriir muddo lix bilood ah, hal sano xogta iyo diiwaanka macaamiisha gorfaynta iibsanayaa muddo toban sano.
Doporučený text: Haddii aad ku darto faallo, faallooyinka iyo faylkooda waxaa lagu sii hayn doonaa ilaa xad. Xogta waxaa lagu kaydiyaa ujeedka ujeedada si toos ah u aqoonsanaysa oo u oggolaatay dhammaan faallooyinka ku xiga halkii ay ku hayn lahaayeen safka dhexdhexaadka ah.
Kuwa isticmaala boggaan (haddii ay leeyihiin ikhtiyaarkan), waxaan sidoo kale kaydineynaa macluumaadka shakhsi ahaaneed ee ay ku siiyaan profile user. Dhammaan dadka isticmaala waxay arki karaan, beddeli karaan, ama tirtiri karaan macluumaadka shakhsi ahaaneed wakhti kasta (marka laga reebo inayan beddeli karin magacooda). Webmasters waxay sidoo kale arki karaan oo wax ka beddeli karaan macluumaadkan.
Waa maxay xuquuqdaada?
Qaybtaan, waa inaad sharaxdaa waxa xuquuqaha ay isticmaalaan macluumaadkooda iyo sida ay uga codsan karaan iyaga.
Doporučený text: Haddii aad ku leedahay xisaabta on this site ama aad tahay ku daray comments, waxaad dalban kartaa helitaanka file dhoofinta macluumaadka shakhsiga ah in aan kaa hayno, oo ay ku jiraan dhammaan macluumaadka aad na siisay. Waxa kale oo aad codsan kartaa saarista wixii macluumaad shakhsiyeed oo aan kaa hayno. Doorashadan waxa kuma jiraan macluumaad ah in aan waxaa looga baahan yahay in ay sii maamulka, sababao sharci ama ammaanka.
Xaggee baad u dirtaa xogtaada?
Qaybtani waa inay ku taxdaa dhammaan macluumaadka wareejinta macluumaadka ku saabsan boggaaga ka baxsan Midowga Yurub iyo sharax sida macluumaadkaas loo ilaaliyo heerarka asturnaanta ee Yurub. Qaybtani waxaa ku jiri kara websaydhkaaga martigelinta, kaydinta daruuraha, ama adeegyada kale ee saddexaad.
sharciga ilaalinta xogta Yurub u baahan tahay macluumaad ku saabsan dadka ku nool Yurub in wareejiyo meel ka baxsan Midowga Yurub waxaa ilaaliya xeerarka isku mid ah iyo shuruucda sida haddii xogta lagu saleeyay in Europe. Sidaa darteed, marka lagu daro gelinaya xogta meesha, waa in aad sharaxaad ka bixi sida aad loo hubiyo in heerarkani la fuliyey, adiga ama cid saddexaad by, eegeyn in heshiis sida faqradaha ilaalinta gaarka ah ee heshiisyada model ama qabanaya sharciyada shirkadaha .
Doporučený text: Faallooyinka booqashooyinka waxaa lagu baari karaa adeegga adeegga spam ee isha lagu hayo ee ku yaalla dibadda.
Qaybtan, waa inaad siisaa hab xiriir oo loogu talagalay welwelka qarsoodiga. Haddii lagaa rabo inaad wakiil leedahay, fadlan sii sheeg magacooda iyo faahfaahinta xiriir buuxa.
Haddii aad u isticmaasho websaydh loogu talagalay ujeedo ganacsi oo ku lug leh aruurinta ama ururinta macluumaadka shakhsi ahaaneed, waa inaad sidoo kale bixisaa macluumaadka soo socda ee siyaasadahaaga.
Sida aan u ilaalino macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed
Qaybtan, waa inaad sharaxdaa tallaabooyinka aad qaadatay si aad u ilaaliso macluumaadka user. Tusaale ahaan, waxaad bixin kartaa macluumaad ku saabsan tallaabooyin farsamo, sida: sirta; tallaabooyinka amniga sida baarisyo badan oo kala duwan; iyo tallaabooyin kale sida tababarka shaqaalaha ee aagga ilaalinta macluumaadka shakhsiyeed. Haddii aad sameysay qiimeyn saameyneed ee asturnaanta, waxaad sidoo kale sheegi kartaa.
Maxay yihiin nidaamyada daadinta macluumaadka?
In qaybtan waa in aad loo sharaxo waxa nidaamyada waxaa laga heli karaa si wax looga qabto baxsiga xogta, haddii dhab ah ama ku iman kara, sida nidaamka warbixinta gudaha, hababka of xiriir ama abaal marin u helidda dhiqlaha.
Xaggee saddexaad oo aan ka helno macluumaadka shakhsiyeed?
Haddii aad goobta helo xogta user ka labada dhinac saddexaad, oo ay ku jiraan xayeysiiya, macluumaadka waa in lagu daro qaybta aad ogaysiiska u gaarka ah, kaas oo ka hadlaya xogta dhinac saddexaad.
Waa maxay nooca go'aan qaadashada ee aan sameyno iyo / ama xogta macmiilka
Haddii aad bixisaa adeegyo ay ka mid yihiin go'aan iswada - tusaale ahaan, jidaynayey macaamiisha si aad u codsatid credit ama ururiyaan xogta si ay profile advertising - aad leedahay si gelin hawlgaladaa, oo ka mid ah macluumaad ku saabsan sida macluumaadkan waxaa loo isticmaalaa, waxa ka dhigay go'aanka ah in kuwan xogta darka iyo xuquuqda ay leeyihiin users of go'aamada aan qabashada aadanaha.
Waajibaadka macluumaadka ee warshadaha nidaamsan
Haddii aad tahay xubin ka mid ah warshadaha nidaamsan ama haddii lagugu hayo sharciyada kale ee gaarka ah, waxaa laga yaabaa in lagu weydiisto inaad bixiso macluumaadka lagama maarmaanka ah.
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waayo PetrPikora.com
Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah ama aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan siyaasadda asturnaanta, fadlan si xor ah u nala soo xiriir by email ugu Privacy.
At www.PetrPikora.com aan ka fiirsada gaarka ah ee soo booqda si ay u noqon Aad muhiim ah. document Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Tani Qeexaa si faahfaahsan Noocyada Information Personal la ururiyo oo la diiwaangeliyey by www.PetrPikora.com iyo sida aan u isticmaalno.
Sida shabakadaha kale ee badan ee internetka ah, www.PetrPikora.com waxay isticmaalaan faylasha qoraalka. Faylashaasi waxay kaliya ku qoraan martida goobta - sida caadiga ah habraaca caadiga ah ee marti gelinta shirkadaha iyo qayb ka mid ah martigelinta falanqaynta adeegyada. Macluumaadka gudaha faylasha qoraalka ah waxaa ka mid ah cinwaanka internetka (IP), cinwaanka browserka, Bixiyaha Adeegga Internetka (ISP), shaabadda taariikhda / wakhtiga, bogagga tixraaca / ka baxa, iyo suuragal ahaan tirada tirada. Macluumaadkan waxaa loo isticmaalaa in lagu falanqeeyo isbeddellada, maamulidda bogga, dhaqdhaqaaqa user ee dhaqdhaqaaqa agagaarka, iyo ururinta macluumaadka dadweynaha. Cinwaanada IP, iyo macluumaad kale oo noocaas ah looma xiriirin wax macluumaad ah oo shakhsi ahaan loo aqoonsan karo.
www.PetrPikora.com isticmaalaa cookies ku kaydsan wax warbixin ah oo ku saabsan martida 'doorbidida, macluumaadka user-gaar ah record on taas oo pages booqdaha goobta helaa ama booqashooyinka, iyo in la shakhsiyeeyo ama Customize our page web content ku salaysan visitors' nooca browser ama macluumaad kale oo Booqdaha ayaa ku soo diraya iyaga oo isticmaalaya tarjumadooda.
→ Google, sida iibiyaha qaybta sadexaad, wuxuu isticmaalaa cookies si uu ugu adeego xayeysiisyada www.PetrPikora.com.
→ Isticmaalka Google ee adeega DART wuxuu awood u leeyahay inuu u adeego xayeysiisyada booqdayaasha boggayaga oo ku saleysan booqashadooda www.PetrPikora.com iyo goobaha kale ee internetka.
→ Users laga yaabaa out of isticmaalka buskudka iyo hoto adigoo booqanaya ad Google iyo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah network content ee URL soo socda - http://www.google.com/privacy_ads.html
Partners Our Advertising
Qaar ka mid ah wada-hawlgalayaasha our advertising laga yaabaa isticmaali cookies iyo kati web on our site. Wada-hawlgalayaasha Our advertising ka mid ah .......
waxaad la tashan karaa liiska this si aad u ogaato Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxaa kasta oo wada-hawlgalayaasha advertising of www.PetrPikora.com ah.
www.PetrPikora.com awood u lahayn ama gacanta cookies qawl loo isticmaalo by xayeysiiya dhinac saddexaad.
Xisbiga Saddexaad Privacy Policies
Waa in aad la tashato siyaasadaha gaarka ah ee ka mid ah kooxahan sadexaad ee xayeysiisyada si ay u helaan faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan dhaqankooda iyo sidoo kale tilmaamo ku saabsan sida loo doorto hababka qaarkood. Nidaamka gaarka ah ee www.PetrPikora.com ma khuseeyo, mana awoodno inaan xakameyno waxqabadyada, xayeysiisyada kale ama boggaga internetka. Waxaad ka heli kartaa liis dhamaystiran ee siyaasadaha gaarka ah ee khaaska ah iyo xiriirkooda halkan: Links Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Haddii aad doonayso inaad gab cookies, si aad u samaysaan si aad fursadaha browser shaqsi. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan maareynta cookie la daalacashada web gaar ah waxaa laga heli karaa website-yada kala ah daalacashada '. Waa Maxay Cookies?
Waxaan aaminsannahay inay muhiim tahay in la siiyo ilaalo dheeraad ah oo loogu talagalay carruurta internetka. Waxaan ku dhiirigelineynaa waalidiinta iyo dadka masuulka ka ah in ay waqti la qaataan internetka caruurtooda si ay ula socdaan, uga qaybqaataan, iyo / ama u kormeeraan oo u hagaan hawshooda internetka. Www.PetrPikora.com ma ogtahay in ay ururiyaan macluumaadka shakhsiyadeed ee lagu garan karo carruurta da'doodu ka hooseyso 13. Haddii waalidka ama qofka ilmaha masuulka ka ah ayaa aaminsan in www.PetrPikora.com leedahay in ay database macluumaadka shaqsiga lagu garan karo-ilmaha da'doodu ka yar tahay 13, fadlan nala soo xiriir si deg deg ah (isticmaalaya xidhiidhka ee qeybta kowaad) oo aan isticmaali doonaa dadaalka aan ugu jirno fiican Si dhakhso ah looga saaro macluumaadka noocaas ah ee diiwaankeena.
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Online Kaliya
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Tani waxay khusaysaa keliya inay Hawlaha online iyo shaqeynayaa visitors to our website iyo macluumaad ku saabsan la wadaago iyo / ama waxaa laga soo ururiyey. siyaasadda Taasi ma khuseyso in ay macluumaad la ururiyey offline ama via channels kale oo aan ahayn bogga internetka ee this.
By isticmaalaya website, waxaad halkan ku ogolaanayaa in siyaasadda asturnaanta iyo ku heshiiyaan in ay la eego ITS.
Siyaasadda Khaaska ah ayaa ugu dambeysay la cusbooneysiiyay: Axad, Agoosto 27th, 2017.
Ma habboon tahay in aan u cusbooneysiin, hagaajiya ama wax isbedel ku sharciyada macluumaadka gaarka ah, isbedel Kuwa halkan soo gelin doonaa.
Luuqadan muunada ah waxaa ka mid ah aasaaska macluumaadka shakhsiga ah ee dukaankaagu uu ururin karo, keydinta iyo wadaagista, iyo sidoo kale cidda heli karta xogtaas. Iyadoo ku xiran hadba sida loo dajiyay iyo waxtarka dheeraadka ah ee loo isticmaalo, macluumaadka gaarka ah ee ay wadaagaan dukaankaagu way kala duwanaan doonaan. Waxaan kugula talinaynaa la-talin qareen markaad go'aan ka gaarto macluumaadkaaga si aad u soo bandhigto siyaasaddaada gaarka ah.
Waxaanu aruurineynaa macluumaadka ku saabsan inta lagu gudajiro habka lacag bixinta dukaanka.
Waxaan sidoo kale u isticmaali doonaa cookies si ay u ilaaliyaan waxyaabaha aad kaarkaaga gaaro inta aad booqanayso boggayaga.
Fiiro gaar ah: Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad si faahfaahsan u qeexdid siyaasaddaada cookie iyo waxaad ku xiran tahay qaybtaas halkan.
Sida caadiga ah waxaan ku kaydinnaa macluumaad adiga kugu saabsan ilaa iyo inta aan u baahannahay macluumaadka ujeedada aan u ururinno oo aan u adeegsano, oo sharci ahaan looma baahna inaan sii wadno sii wadista. Tusaale ahaan, waxaan ku kaydin doonaa macluumaadka nidaamka sanadka XXX ee canshuurta iyo xisaabinta. Tan waxaa ka mid ah magacaaga, cinwaanka emailka iyo cinwaanada biilasha iyo maraakiibta.
Qeybtan waa inaad ku taxdaa cidda aad wadaageyso xogta, iyo ujeedada. Tani waxaa ka mid noqon kara, laakiin aan ku xaddidneyn, falanqeynta, suuq-geynta, gawaarida lacag bixinta, bixiyeyaasha maraakiibta, iyo seddexaad oo ay ku jiraan.
Waxaan wadaagnaa macluumaadka dhinacyada saddexaad ee naga caawiya inaanu bixinno amarradeena iyo adeegyadeena; tusaale ahaan -
Qeybtan hoos ku xusan waa inaad qortaa qaybaha lacag bixinta ee saddexaad ee aad isticmaasho si aad lacag ugu qaadato dukaankaaga maaddaama kuwani ay maareyn karaan xogta macaamiisha. Waxaan ku darsannay PayPal tusaale ahaan, laakiin waa inaad ka saartid tan haddii aadan isticmaaleynin PayPal.
Adiga oo isticmaalaya kordhintaan, waxaa laga yaabaa inaad kaydinayso xog shakhsiyeed ama aad la wadaagto xogta adeeg dibadeed. Baro waxyaabo badan oo ku saabsan sida tani u shaqeyso, oo ay ku jiraan waxa aad doonayso inaad ku darto siyaasaddaada gaarka ah.
Isha laga helay: Revolution Revolution
Haddii aad isticmaaleysid Google Web Fonts (default) ama fiidiyowyada ama codadka lagu ciyaaro YouTube ama Vimeo ee Revolution Revolution, waxaanu kugula talineynaa in lagu daro weedha qoraalka ee u dhiganta booliska gaarka ah:
Boggayaga ayaa isticmaalaya qalab ka soo baxa YouTube, kaas oo ka shaqeeya Google. Shaqaalaha bogagga waa YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
Haddii aad booqatid mid ka mid ah boggayaga oo ku dhex jira plug-ka YouTube, xiriir la leh server-yada YouTube ayaa la aasaasay. Halkan server-ga YouTube waxaa lagu ogeysiiyaa boggayaga aad soo booqatay.
Haddii aad gashid xisaabtaada YouTube, YouTube wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si toos ah ugula wadaagto dabeecadaada daalacashadaaga. Waad ka hortagi kartaa tan tan markaad gasho xisaabtaada YouTube.
YouTube ayaa loo isticmaalaa si loo sameeyo website-ka rafcaanka. Tani waxay ka dhigeysaa daneyn xaq ah oo hoos timaada Art. 6 (1) (f) DSGVO.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan macaamiisha macluumaadka isticmaalka waxaa laga heli karaa bayaanka ilaalinta macluumaadka ee YouTube https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Boggayaga ayaa isticmaala qaababka ay bixiso Vimeo video bog Adeeggan waxaa bixiya Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Haddii aad booqatid mid ka mid ah boggayaga oo ku jira fiilada Vimeo, waxaa la isku xiraa xarumaha Vimeo. Halkan Vimeo server waa la ogeysiiyaa boggayaga aad soo booqatay. Intaa waxaa dheer, Vimeo waxay heli doontaa cinwaankaaga IP. Tani waxay sidoo kale ku khuseysaa haddii aanad ku galin Vimeo marka aad soo booqanayso plugin ama aan lahayn xisaab Vimeo. Macluumaadka waxaa loo gudbiyaa server Vimeo ee Maraykanka, halkaasoo lagu kaydiyo.
Haddii lagugu soo galo xisaabtaada Vimeo, Vimeo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si toos ah ula xidhiidho dabcigaaga daalacashadaaga shakhsi ahaan shakhsi ahaaneed. Waad ka hortagi kartaa tan adoo geynaya xisaabtaada Vimeo.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan sida loo maareynayo xogta macluumaadka, fadlan tixraac Siyaasadda Khaaska ah ee Vimeo https://vimeo.com/privacy.
Shabakadaha Webka ee Google
Wixii ka mid ah matalaadda uniform ee xarfaha, boggani wuxuu isticmaalaa xarfaha internetka ee ay bixiso Google. Marka aad bog furanayso, gambarkaagu wuxuu ku dhejiyaa farta webka loo baahan yahay ee ku jira galka sawirrada si aad u muujiso qoraallada iyo xarfaha si sax ah.
Ujeedadaas awgeed, browserkaagu waa inuu xiriir toos ah la yeeshaa serverka Google. Google waxay ogaaneysaa in boggayaga internetka laga helayo cinwaankaaga IP. Isticmaalka faylasha Webka ee Google waxaa lagu sameeyaa danaha ku saabsan soo bandhigid muuqda iyo soo jiidasho leh ee ku saabsan fiilooyinka. Tani waxay ka dhigeysaa daneyn xaq ah oo hoos timaada Art. 6 (1) (f) DSGVO.
Haddii badeecadaada aysan taageerno midabada webka, font-ka caadiga ah waxaa isticmaala kombuyuutarkaaga.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan isticmaalka xogta macluumaadka, ayaa laga heli karaa https://developers.google.com/fonts/faq iyo nidaamka gaarka ah ee Google ee ku yaala https://www.google.com/policies/privacy/.
Bogagga our, plugins ee shabakada bulshada SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, UK) lagu daro suurtowdaa. Plugins SoundCloud waxaa lagu aqoonsan karaa logo ee SoundCloud on our site.
Markaad soo booqato boggayaga, xiriir toos ah oo ka dhexeeya biraawsarkaaga iyo server SoundCloud ayaa lagu dhisay iyadoo loo marayo plugin. Tani waxay u ogolaaneysaa SoundCloud inuu helo macluumaadka aad booqatay boggayaga cinwaankaaga IP. Haddii aad gujiso "Like" ama "Share" inta aad gasho xisaabtaada SoundCloud, waxaad isku xiriirin kartaa boggayaga boggaaga SoundCloud. Tani waxay ka dhigan tahay in SoundCloud uu ku soo wadi karo booqashooyinka boggayaga oo leh xisaabtaada isticmaalahaaga. Waxaan jeclaan lahayn inaan tilmaamno in, sida bixiyaha boggaan, ma ogaanno macnaha xogta la kala diray ama sida loo isticmaali doono SoundCloud. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan siyaasadda gaarka ah ee SoundCloud, fadlan tag https://soundcloud.com/pages/privacy.
Haddii aadan rabin SoundCloud si aad ula macaamilato booqashadaada boggaaga adoo isticmaalaya xisaabta SoundCloud, fadlan geli koontadaada SoundCloud.
Saacadda 5 horaantii